'रोबोट २' मा एलियनको भूमिकामा देखिँदै अक्षय
‘रोबोट २’ मा एलियनको भूमिकामा देखिँदै अक्षय
एजेन्सी । अक्षय कुमार र रजनीकान्तको मुख्य भूमिका रहेको रोबोटको अर्को भाग २.० अर्को वर्ष मात्र रिलिज हुनेछ । अहिलेसम्म भने यस फिल्मको पोस्टर मात्र बाहिर आएको छ । उक्त पोस्टरले अक्षयकुमारलाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍याइसकेको छ । त्यससँगै यस फिल्मका बारेमा अनुमान लगाइरहेकाहरुले पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरु दिइरहेका छन् ।
हालैमा आएको एक रिपोर्टका अनुसार यस फिल्ममा अक्षय कुमार कागको भूमिकामा देखा पर्ने जनाइएको छ । फिल्ममा अक्षयले खेल्न लागेको चरित्र एउटा अनुसन्धात्मक परीक्षण गर्ने क्रममा उनी असफल भएपछि उनी काग बन्ने बताइएको छ । तर अन्य विभिन्न स्रोतहरुले भने उनी काग होइन एलियनको भूमिकामा देखिने दावी पनि गरिरहेका छन् ।
उक्त फिल्म यूनिटले यसको प्रमोशनको तयारी सुरु गरिसकेको छ । विश्वभरि यस फिल्मको प्रमोशन हट एयर बलुनबाट गरिने बताइएको छ । फिल्मको ट्रेलर भने राजनीकान्तको जन्मदिन १२ डिसेम्बरमा रिलिज गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
विहेको कार्ड भाइरल भएपछि के भन्छिन् आलिया ?
काठमाडौंमा मोटोपना भएका युवतीहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदै
फिल्म वारबाट यशराज फिल्मले कमायो १७० करोड नाफा
गायक दुर्गेशविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, तिहारले गीत विवादमा
जन्मदिनमा सनी लियीनीले पति डेनियललाई भावुक ‘लभ नोट’ लेखिन्
जिग्रीको आक्रोशः उजुरी मात्र किन हातमा हत्कडी नै लगाएर थुनिदिनुस्
सलमान खानको फिल्म दंबग ३ को ट्रेलर अक्टोबर २३ मा रिलिज हुने
जिग्री र पाँडेविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, कथा र चरित्र चोरेको आरोप
कार्त्तिक र साराको ब्रेकअप भएकै हो त ?
दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आरआरआर’को रिलिज डेट सर्यो
फिल्म ‘गंगुबाइ कथियावाडी’मा आलिया भट
विद्या बालन र कटरिना कैफले एउटै फिल्ममा काम गर्ने
हालसम्म फिल्म ‘वार’ले कति कमायो
‘आलिया र रनवीरको जोडी परफेक्ट’
तरकारीवाली कुसुम श्रेष्ठको पहिलो म्युजिक भिडियो ‘कान्छा कान्छी’ सार्वजनिक
ट्विटरमा सबैभन्दा बढी फलोअर शाहरुख खानका, दोस्रोमा को ?
ऋतिक र रोशनलाई लिएर फराहले फिल्म निर्माण गर्ने
अक्सर मान्छेहरु यो ठान्छन् कि जलवायु परिवर्तन वातावरणवादी, हरियाली अभियन्ताहरुको मात्र सवाल हो । यो राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक...